စာသားတွေ က အကြမ်းစားတွေ မိုက်တယ် ရေးချက်ကို ကြိုက်လို့ ကူးပြီးပြန်တင်တာမို့ ဖတ်ကြည့်ပါ – Zartiman
မင်းဆီမှာရှိတဲ့ မင်းမလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကို အပြစ်မြင် ငြူစူစောင်းမြောင်းပီးသောကတွေပေနေမယ့် အစား မင်းမလုပ်နိုင်တာတွေကို သူဝိုင်းကူပြီးမင်းလုပ်နိုင်စွမ်း ရှိတာတွေကိုအပြုံးတွေနဲ့ချီးကျူးနေမယ့်မိန်းမမျိုးကသာလျှင်မင်းကိုတဘဝလုံးစာလက်တွဲထားနိုင်မှာပါ …..ချောကလတ်နဲ့ပန်းစည်းမျှော်နေတာထက် မင်းစာမေးပွဲ မင်းအလုပ် …. မင်း ရဲ့ဘဝနောင်ရေးတွေအတွက် ဘုရား ဆွမ်းတော်ကပ် ပန်းပူဇော်ပြီး မင်းကွယ်ရာမှာ မင်းတဦး တည်းအတွက် သစ္စာရှိရှိ ဆုတောင်းပေးနေမယ့်မိန်းမမျိုး ကသာ အမိနဲ့တူသောမိန်းမ ….။
ညီမနှင့်တူသောမိန်းမ … ကျွန်နဲ့တူသောမိန်းမ မျိုးပါ။အဲတော့ ၃သောင်းတန် ပီဇာတစ်ပြားစားရဖို့အငတ်ခံငွေ စုရဦးမယ့်အစား …. ၁၀၀ ကျပ်တန် ဆမူစာလေးစားပြီး အပိုငွေကိုစုကြပါ …သိန်း ၈၀၀၀ တန် ကားလက်ဆောင် ပေးတဲ့ ယောက်ျားကို လိုချင်ရင် …..ကိုယ် ကိုယ် တိုင်၌က ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော …. စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ အနည်းဆုံး တော့သိန်း ၄၀၀၀လောက်တန်အောင်ကြိုးစားကြပါ .. ကိုယ်တိုင်က ၁၀ တန်းလည်းမအောင် ဝင်ငွေက တလ ၂ သိန်းမပြည့် ၊ ရုပ်ရည်ကရွက်ကြမ်း ရည်ကြို …. မိဘကလည်း လက်လုပ် လက်စား ဘဝသမား။
အဲ့လိုလူမျိုးတွေက သိန်း ၈၀၀၀ တန် ကားလက်ဆောင်ပေးတဲ့ postကို …. သူတို့ရည်းစား ကောင်လေးတွေဝေါမှာ လာလာ Tag ကြ တာမြင်တော့ ငါ့တပည့်တွေအစားရင်နာမိတယ်။Ro ခွင့်ရှိတယ် Overtine ခွင့်မရှိဘူး။လက်ချင်းချိတ်ပြီး 200 တန် YBS တူတူစီးရဲတဲ့ လက်တွဲဖော် အစစ်ကိုသာရှာကြပါ သားတို့။မင်းဆီမှာငွေတသောင်းပဲရှိမှန်းသိရက်နဲ့ ငွေ၈၀၀၀သုံးရက်တဲ့မိန်းမဟာ မင်းသိန်း၁၀၀ရှိရင် သူ သိန်း၈၀ဖြုန်းဖို့ ဝန်လေးမှာမဟုတ်ဘူး …..
မင်းမှာရှိတဲ့ငွေ၁၀၀၀၀ကို မုန့်၂၀၀၀ဖိုးလောက်စားပြီး ကျန်တဲ့ပိုက်ဆံ ကိုမင်းအဆင်ပြေဖို့ အလိုက်တသိချန်ထားပေးတဲ့မိန်းမမျိုးသာ လက်တွဲဖော်ဖြစ်သင့်တာပေါ့။ ဘူဖေးအဝစားဘယ်လောက် ဟိုဆိုင်မှာ စားရင် ဘယ်လောက် ဒါ တွေ Share ပြီး “လိုက်ကျွေးကိုကို” ဆိုတာမျိုးထက် “ကို့ကို သဲဒါမျိုးလေးချက်ကျွေးမယ်” “ကို ဒါမျိုးလေးကြိုက်လား သဲချက်ပေးမယ်” ဆိုတာပဲ ရေးသင့်တယ် …. တင်သင့် တယ် ….. Ro သင့်တယ် …မိန်းကလေးဖိနပ်ကို ဒူးထောက်ပြီးစီးပေးတဲ့ postတွေကို ထိုင် Share ပြီး ။
ဒါမျိုးမှ Ro တယ်ထင်နေတာမျိုးထက် ရွှေတိဂုံဘုရားကို ဖိနပ်လေးကိုယ်စီကိုင်ပြီး လှေကားထစ် တွေပေါ်တက်တိုင်း မင်းမျက်နှာလေး ကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့် ပြီး ပီတိဖြစ်မယ့်မိန်းကလေးမျိုးကိုသာရှာသင့်တယ် …. ကားသိပ်မက်တဲ့ မိန်းမမျိုးဟာ ကားရှိတဲ့လူတွေ့ရင် ပါသွား မှာပဲ….. ကားစုတ် ရှိတဲ့သူဆီကနေ နောက်ဆုံးပေါ် ကားကောင်းရှိတဲ့သူဆီပါသွားမှာပဲ …..မင်းကိုတော့ ကျော်သူ့ ကားပေါ်တင်ရင် တင် ပေးလိမ့်မယ် ……သူကတော့ ဇိမ်ခံကားပေါ်ကနေမင်းကိုတာ့တာပြသွား မှာအသေချာဘဲလေ …..။
စည်းစိမ်ချမ်းသာတာကိုမက်တဲ့မိန်းမဟာ …. မင်းထက်ချမ်းသာတဲ့သူနဲ့တွေ့ရင် ပါသွားမှာ … Six pack ကိုမှကြိုက်တဲ့မိန်းမဟာ ….. မင်းဗိုက်ပူလာ တဲ့အချိန်ထားခဲ့မှာပဲ …ရုပ်ချောတာကြိုက်တဲ့မိန်းမဟာ မင်းအိုမင်းလာချိန်….မင်းထက်ပိုမိုချောမောတဲ့သူနဲ့ တွေ့ရင် ပါသွားမှာပဲ …မင်းမှမင်းဘဲဖြစ်နေလို့ မင်းကို ချစ်နေတဲ့မိန်းမမျိုးကသာမင်းကိုတသက်လုံးချစ်နေမှာ သေချာတယ်။
မငျးဆီမှာရှိတဲ့ မငျးမလုပျနိုငျတဲ့အရာတှကေို အပွဈမွငျ ငွူစူစောငျးမွောငျးပီးသောကတှပေနေမေယျ့ အစား မငျးမလုပျနိုငျတာတှကေို သူဝိုငျးကူပွီးမငျးလုပျနိုငျစှမျး ရှိတာတှကေိုအပွုံးတှနေဲ့ခြီးကြူးနမေယျ့မိနျးမမြိုးကသာလြှငျမငျးကိုတဘဝလုံးစာလကျတှဲထားနိုငျမှာပါ …..ခြောကလတျနဲ့ပနျးစညျးမြှျောနတောထကျ မငျးစာမေးပှဲ မငျးအလုပျ …. မငျး ရဲ့ဘဝနောငျရေးတှအေတှကျ ဘုရား ဆှမျးတျောကပျ ပနျးပူဇျောပွီး မငျးကှယျရာမှာ မငျးတဦး တညျးအတှကျ သစ်စာရှိရှိ ဆုတောငျးပေးနမေယျ့မိနျးမမြိုး ကသာ အမိနဲ့တူသောမိနျးမ ….။
ညီမနှငျ့တူသောမိနျးမ … ကြှနျနဲ့တူသောမိနျးမ မြိုးပါ။အဲတော့ ၃သောငျးတနျ ပီဇာတဈပွားစားရဖို့အငတျခံငှေ စုရဦးမယျ့အစား …. ၁၀၀ ကပျြတနျ ဆမူစာလေးစားပွီး အပိုငှကေိုစုကွပါ …သိနျး ၈၀၀၀ တနျ ကားလကျဆောငျ ပေးတဲ့ ယောကျြားကို လိုခငျြရငျ …..ကိုယျ ကိုယျ တိုငျ၌က ရုပျပိုငျးဆိုငျရာရော …. စိတျပိုငျးဆိုငျရာပါ အနညျးဆုံး တော့သိနျး ၄၀၀၀လောကျတနျအောငျကွိုးစားကွပါ .. ကိုယျတိုငျက ၁၀ တနျးလညျးမအောငျ ဝငျငှကေ တလ ၂ သိနျးမပွညျ့ ၊ ရုပျရညျကရှကျကွမျး ရညျကွို …. မိဘကလညျး လကျလုပျ လကျစား ဘဝသမား။
အဲ့လိုလူမြိုးတှကေ သိနျး ၈၀၀၀ တနျ ကားလကျဆောငျပေးတဲ့ postကို …. သူတို့ရညျးစား ကောငျလေးတှဝေေါမှာ လာလာ Tag ကွ တာမွငျတော့ ငါ့တပညျ့တှအေစားရငျနာမိတယျ။Ro ခှငျ့ရှိတယျ Overtine ခှငျ့မရှိဘူး။လကျခငျြးခြိတျပွီး 200 တနျ YBS တူတူစီးရဲတဲ့ လကျတှဲဖျော အစဈကိုသာရှာကွပါ သားတို့။မငျးဆီမှာငှတေသောငျးပဲရှိမှနျးသိရကျနဲ့ ငှေ၈၀၀၀သုံးရကျတဲ့မိနျးမဟာ မငျးသိနျး၁၀၀ရှိရငျ သူ သိနျး၈၀ဖွုနျးဖို့ ဝနျလေးမှာမဟုတျဘူး …..
မငျးမှာရှိတဲ့ငှေ၁၀၀၀၀ကို မုနျ့၂၀၀၀ဖိုးလောကျစားပွီး ကနျြတဲ့ပိုကျဆံ ကိုမငျးအဆငျပွဖေို့ အလိုကျတသိခနျြထားပေးတဲ့မိနျးမမြိုးသာ လကျတှဲဖျောဖွဈသငျ့တာပေါ့။ ဘူဖေးအဝစားဘယျလောကျ ဟိုဆိုငျမှာ စားရငျ ဘယျလောကျ ဒါ တှေ Share ပွီး “လိုကျကြှေးကိုကို” ဆိုတာမြိုးထကျ “ကို့ကို သဲဒါမြိုးလေးခကျြကြှေးမယျ” “ကို ဒါမြိုးလေးကွိုကျလား သဲခကျြပေးမယျ” ဆိုတာပဲ ရေးသငျ့တယျ …. တငျသငျ့ တယျ ….. Ro သငျ့တယျ …မိနျးကလေးဖိနပျကို ဒူးထောကျပွီးစီးပေးတဲ့ postတှကေို ထိုငျ Share ပွီး ။
ဒါမြိုးမှ Ro တယျထငျနတောမြိုးထကျ ရှတေိဂုံဘုရားကို ဖိနပျလေးကိုယျစီကိုငျပွီး လှကေားထဈ တှပေျေါတကျတိုငျး မငျးမကျြနှာလေး ကိုတစိမျ့စိမျ့ကွညျ့ ပွီး ပီတိဖွဈမယျ့မိနျးကလေးမြိုးကိုသာရှာသငျ့တယျ …. ကားသိပျမကျတဲ့ မိနျးမမြိုးဟာ ကားရှိတဲ့လူတှရေ့ငျ ပါသှား မှာပဲ….. ကားစုတျ ရှိတဲ့သူဆီကနေ နောကျဆုံးပျေါ ကားကောငျးရှိတဲ့သူဆီပါသှားမှာပဲ …..မငျးကိုတော့ ကြျောသူ့ ကားပျေါတငျရငျ တငျ ပေးလိမျ့မယျ ……သူကတော့ ဇိမျခံကားပျေါကနမေငျးကိုတာ့တာပွသှား မှာအသခြောဘဲလေ …..။
စညျးစိမျခမျြးသာတာကိုမကျတဲ့မိနျးမဟာ …. မငျးထကျခမျြးသာတဲ့သူနဲ့တှရေ့ငျ ပါသှားမှာ … Six pack ကိုမှကွိုကျတဲ့မိနျးမဟာ ….. မငျးဗိုကျပူလာ တဲ့အခြိနျထားခဲ့မှာပဲ …ရုပျခြောတာကွိုကျတဲ့မိနျးမဟာ မငျးအိုမငျးလာခြိနျ….မငျးထကျပိုမိုခြောမောတဲ့သူနဲ့ တှရေ့ငျ ပါသှားမှာပဲ …မငျးမှမငျးဘဲဖွဈနလေို့ မငျးကို ခဈြနတေဲ့မိနျးမမြိုးကသာမငျးကိုတသကျလုံးခဈြနမှော သခြောတယျ။
ကိုဗစ်ကာလ ပြောင်းလဲ တိုးတက်လာတဲ့ အလုပ်အကိုင်များ နှင့် လူငယ်တွေ အတွက် အနာဂတ် ပုံစံ အကြောင်း
အကြပ် အတည်း အမျိုး မျိုး ကို (၇) ရက် အတွင်း လွတ်မြောက် စေနိုင် တဲ့ အဓိ ဌာန်….ဝင်ဖြစ်အောင်ဝင်ကြည့်ပါ